Gabroota Ar-Rahmaan Archives - Ibsaa Jireenyaa
Category: Gabroota Ar-Rahmaan
November 9, 2019 Sammubani One comment
Kutaa darbe keessatti hojii babbadoo gabroonni Ar-Rahmaan irraa fagaatan ilaalu jalqabne turre. Badiwwan gurguddoo keessaa shirkii ilaalle jirra. Har’a immoo itti fufuun “ajjeechaa” ni ilaalla.
November 6, 2019 Sammubani Leave a comment
Rakkoolee gurguddaa jireenya keessatti nama muudatan keessaa tokko rakkoo diinagdeeti. Yommuu qabeenya argatan garmalee israafa gochuun (qisaasessuun) dhiphinna cimaatti seenu. Yookiin immoo doy’a ta’uun osoo itti hin fayyadamin, qabeenyi suni irraa fudhatama ykn inni irraa du’a. Gabroonni Ar-Rahmaan akkaataa diinagde itti horatanii fi bulchan warra beekaniidha. Kutaa darbe keessatti Gabroonni Ar-Rahmaan namoota waliin walitti dhufeenya akkami akka qabanii fi ibaada akkamitti akka hojjatan ilaalle turre. Har’a immoo diinagdee waliin hariiroo akkami akka qaban ni ilaalla. Amaloota kanniin qo’annee diinagdee keenya too’achuu fi haala sirriin bulchuuf nuti qophiidhaa? Waliin haa jalqabnu…